သငျသညျမှားခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမွေးဖွားခဲ့ | Apg29
ဇန်နဝါရီလ 7, 2019 Louise သဲပြင်သစ်ကလပ် Fleury Loiret နဲ့သူ့ရဲ့စာချုပ်ခြိုးဖောကျသောသတင်းတို့သည် လာ. ကစားရပ်တန့် လက်ပစ်ဘောလုံး။ အဆိုပါအကြောင်းပြချက်ကျား dysphoria ဖြစ်ပါတယ်။
ငါကြည့်ရှု ဝီကီပီးဒီးယား သူမ၏အမည်ပြောင်ကိုယ်ကနားလည်သကဲ့သို့ဘုရားသခင်ဆိုလိုတာက Louis, ကြောင်း။ တစ်ဦးတည်းဤသည်ဆုံးရှုံးခြင်း၏ကြေကွဲဖွယ်အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြသည်။
ကျား, မ dysphoria
Louis သဲ, ကျား, မ dysphoria များအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးခံရဖို့, လက်ပစ်ဘောလုံးကစားသမားဘဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့သာ 26 နှစ်ရှိပြီဆုံးဖြတ်။
သူမအဘို့ကစားသည်သူ၏လက်ပစ်ဘောလုံးကစားသမားဘ Lanterns Ik Sävehoft နှင့်နှစ်ခုကိုပြင်သစ်ကလပ် Brest Brittany HB နှင့် Fleury Loiret ။
ကျား dysphoria ဆေးပညာရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့မှားကျား, မအတူမွေးဖွားနေကြတယ်ထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခံရသောသူတို့သ။
- ငါမကြာသေးမီကမယုံနိုင်လောက်အောင်ဆိုးရွားခံစားခဲ့ရပါပြီ။ အစဉ်မပြတ်ငါတစ်လမ်းအတွက်ကောင်းတဲ့ခဲ့သောကြောင့်ပေါ်တွင်မူတည်သည်အဘယ်အရာကိုလူသိများကြသည်။ ငါမှားခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမွေးဖွားခဲ့သည်။
ဒါဟာသူမအားမိန့်တော်မူ၏ SVT ။ မည်သူမဆိုထင်လျှင်ငါသည်နောက်တဖန်မွေးဖွားနိုင်နိုင်အောင်ဒါပေမဲ့သူတို့မှားခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမွေးဖွားကြသည်! သငျသညျယရှေုကိုလက်ခံရရှိသည့်အခါဒါဟာသင်ရရှိသွားတဲ့။ ထိုအခါကလေးမွေးဖွားအရာအားလုံးပိုင်ခွင့်ရရှိသွားတဲ့!
ယရှေုကလညျး, "အာမ, အာမင်, ငါတဦးတည်းကိုထပ်ဖွားမြင်ဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်လျှင်သူသညျဘုရားသခငျ၏နိုငျငံတျောကိုမမွငျနိုငျသညျ, သငျသညျဆိုသညျကား။ "
ယောဟန် 3: 3.7
သို့သော်သူ့ကိုလက်ခံရရှိကဲ့သို့အများအပြား, မိမိအမည်ပေါ်တွင်ယုံကြည်သောသူတို့အဖို့ဘုရားသခငျ၏သားဖြစ်ပိုင်ခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏။ သူတို့ကမပေးသောအသွေးသို့မဟုတ်ဇာတိပကတိ၏အသို့မဟုတ်လူ၏သျောလညျးဘုရားသခငျ၏အလိုတော်၏အလိုတော်၏, မွေးဖွားနေကြသည်။
ယော 1း12-13
အသွင်ပြောင်း - လိင်အပေါ်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်
ခရစ်ယာန်ရုပ်သံလိုင်း ကောင်းကင်ဘုံ TV7 လိင်ပုဂ္ဂိုလ်များအကြောင်းကိုအလွန်ကောင်းသောမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရှိပါတယ်။ ဘာသာရပ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်ပျော်ရွှင်ကြည့်ရှုပါ။
ကောင်းကင်ဘုံသည် TV7 မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်: သူတို့ရဲ့လိင်သဘာမိမိခန္ဓာကိုယ်သို့သင့်လျော်မခံစားမှုနှင့်အတူရုန်းကန်နေလူတွေကိုတွေ့ဆုံ။
အဆိုပါမှတ်တမ်းရုပ်ရှင် Trans-လိင်ပေါ်ပေါက်ရေးဖို့လှူဒါန်းခဲ့ကြစေခြင်းငှါ, ဘယ်လိုဘုရားသခငျသညျမေးခွန်းကိုငြိမ်းချမ်းရေးဆောင်ကြဉ်းနိုငျသောအချက်များဆွေးနွေးထားပါတယ်။
ဤဆောင်းပါးဖြင့်ဆီသို့ရောက် လာ. , အီးမေးလ်ကအစွန်အဖျား ။
Vecka 21, torsdag 23 maj 2019 kl. 05:02